९ वर्षको हुँदा आमा गुमाए, एक जोर जुत्ता र लुगा लगाएर काठमाण्डौ आए- तक्मे बुढाको संघर्षको यस्तो कथा – पुरा पढ्नुहोस्……
९ वर्षको हुँदा आमा गुमाए, एक जोर जुत्ता र लुगा लगाएर काठमाण्डौ आए- तक्मे बुढाको संघर्षको यस्तो कथा
अभिनेता विल्सन विक्रम राईको आज जन्मदिन परेको छ । जन्मदिनको अवसर पारेर कन्काई नदिमा सामान्य पूजाआजा गरेपछि उनी सांगीतिक कार्यक्रमको लागि लहान गोल बजारमा पुगेका छन् ।
विल्सनले जीवनमा धेरै उतार चढावहरु देखेका छन् । तर ती उतार चढावहरुलाई पार गर्दै उनी अहिले नेपालमा मात्रै हैन बलिउडमा पनि काम गर्न पाउने भाग्यमानी कलाकार बनिसकेका छन् । उनले नेपाली सिनेमा र सिरियलबाट पाएको सफलतासँगै बलिउड सिनेमामा पनि काम गर्ने मौका पाएका हुन् । बलिउडमा शाहिद कपूरसँग उनले भाई मस्ट बि क्रेजीमा काम गरिसकेका छन् । त्यस्तै केही दिन अघि मात्रै उनले अर्को एक सिनेमामा आयशा टाकियासँग काम गरेको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट दिएका थिए । अहिलेको स्थापित र सफल कलाकार विल्सनले बाल्यकालदेखि नै धेरै पीडाहरु भोग्नु परेको थियो ।
सानै उमेरदेखि घरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका विल्सनको कलाकारिताको यात्रा त्यति सहज थिएन । केही समय अघि हामीसँगको कुराकानीमा उनले बाल्यकाल देखि एक सफल कलाकार हुँदा सम्म भोगेका पीडाहरु सेयर गरेका थिए । जसलाई आज हामी उनको जन्मदिन पारेर तपाईँमाझ पस्कँदैछौँ ।
‘म मध्यम बर्गिय परिवारमा जन्मिएको मान्छे हुँ । मेरो बाबा ट्रक, बसको ड्राईभर हुनुहुन्थ्यो । आमाले खाना बेच्ने सानोतिनो होटेल चलाउनुहुन्थ्यो । तर, पढ्न चाहिँ मैलै बोर्डिङ स्कुलबाट नै शुरु गरेको हुँ । झापाको लिटिल फ्लावर ईङ्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट मेरो स्कुलिङ्ग भयो । सानोमा म साह्रै चकचके थिएँ । सानोमा आफूले गरेका चकचक अहिले पनि याद आउँछ । घरमा रङ लगाउन बाँस जोडेर राखिएको खटमा पिङ खेल्न भ्याउँथे ।
अग्लो ठाउँबाट उल्टी सुल्टी हान्दा भुईँमा पछारिएर मेरो टाउकोमा चोट लागेको थियो । धेरैपटक म लडेको छु । चकचके अनी चञ्चलताको उपज मेरो खुट्टामा आगोले पोलेको पनि छ । त्यो हिसाबले पनि म एकदम चकचके थिएँ भन्ने मैले बुझ्छु ।
सानो छँदा नै आमाको मायाबाट टाढा भएँ । म ९ बर्षको हुँदा आमा निकै बिरामी पर्नुभयो । ओखतिमुलोले काम गरेनन्, उहाँसँग रहने दिन सकिएको रहेछ । आमाले हामीलाई छोडेर कहिल्यै नफर्किने गरी जानुभयो । त्यसपछि कलिलो काँधमा जिम्मेवारी बढ्यो । म सानो हुँदाहुँदै ठूलो भएँ । किनकी म भन्दा मुन्तिर एउटा भाई र बहिनी थिए । त्यसैले म सानो भएर बस्न मिलेन । दाजु अर्थात सानै उमेरमा ठूलो भएर जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने भयो ।
त्यहि समयमा एउटा चलचित्र साथीको सुटिङ्ग गर्न झापामा सुटिङ्ग युनिट आयो । सुटिङ्गमा एउटा छोटो रोलको लागि बालकलाकारको आवश्यकता पर्यो । त्यो बाल कलाकारमा म नै छानिएँ । म पहिल्यै देखि बिहे पूजाहरुमा नाच्ने गर्थेँ । त्यसैले पनि छनौटमा म नै पर्न सफल भएको महसुस भयो । त्यो सानो भूमिकाले ममा फिल्मी क्षेत्रप्रतिको नशा जगायो ।
फिल्मी क्षेत्रतर्फ निकै आर्कषित भएँ । यति सम्मकी परिक्षाको समयमापनि स्कुलको किताबभन्दा बढी चलचित्र सम्बन्धी जानकारी दिने एकमात्र पत्रिका कामना पढ्थेँ । चलचित्र क्षेत्रप्रतिको झुकाउका कारण मेरो पढाई राम्रो भएन । सायद मैले त्यो समयमा कामना सँगसँगै स्कुलको किताबहरु पनि पढेको भए मेरो पढाई पनि राम्रो हुन्थ्यो होला ।
सिनेमामा काम गर्नको लागि सानो उमेरमै म काठमाण्डौँ आएँ । यहाँभने तिमी सानै छौ कसरी गर्छौर ? भन्ने खालको कुराकानी हुन्थ्यो । सानो हिरो राखौँ भने पनि तिमी जस्तो हिरो नेपालमा कोहीपनि छैन, कि त हामीले विदेशबाट नै ल्याएर खेलाउन पर्छ त्यो हामी सक्दैनौँ । तिमी फर्क भनेर धेरै अग्रजहरुले सुझाव दिनुहुन्थ्यो । त्यसपछि म फेरि आफ्नो घर झापा फर्किएँ । त्यसपछि घरमा आफ्नो काम गर्न र पढ्न पनि थाले ।
म २०६१ सालमा फेरि पुरानै रहर बोकेर काठमाण्डौँ आए । त्यो समयमा अलिकति शरीर पनि ठूलो भईसकेको थियो । त्यससँगै मानसिक विकास पनि केहि रुपमा भईसकेको थियो । जो मान्छे अभावमा हुर्किएको हुन्छ त्यो मान्छेले अलिकति जुगाड वा हरेक कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुन्छ । त्यो अभाव मैले धेरै भोगेको छु र बुझेको पनि छु । मेरो बहिनीले रोटी खान्छु भनी भने मैले रोटी बेल्ने बेलना माग्न जानु पथ्र्यो । भाई बहिनीको चाहनाका लागि म सजीलै मागेर ल्याउँथे । अहिलेका बच्चाहरु त्यसो गर्न लाज मान्छन् । तर यस्तो अवस्था आयो भने अप्ठ्यारो मान्नुहुदैँन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने भोली त्यो अप्ठ्यारो आफैँलाई पनि पर्न सक्छ ।
बहिनीकै कुरामा बेलनचौकी अर्काले नदिँदा मैले घरमा थाल र बियरको बोट्टलले रोटी बनाएर बहिनीलाई खुवाएको छु । त्यसैले मलाई थाहा छ कि अभावबाट धेरै कुरा सिकिन्छ । त्यो कुरा जीवनको कुनैपनि कालखण्डमा अवश्य सहयोगी हुन्छ ।
काठमाण्डौँमा म आउँदा एकजोर जुत्ता, कालो शर्ट, कालो पाईन्ट थियो । मलाई कालो नै मनपर्ने अनि कालो ढिलो फोहोर हुने भएकोले पनि म कालो रङको लुगा लगाउँछु ।
एउटै लुगा अनि जुत्ता लगाएर २ बर्षसम्म संघर्ष गरे मैले काठमाण्डौँमा । डान्स रेस्टुरेन्ट, हिरोहरुको पछाडि कोरस डान्सहरु पनि गरेको छु । धेरैवटा फिल्महरुमा मैले भोकल यानिकी डबिङ गरेको छु । एउटा स्क्रिनमा तीन जना कलाकारहरुको आवाज मैले नै गरेको पनि रेकर्ड छ । फिल्ममा आफूले रेकर्ड गरेको आवाज सुन्नको लागि म बिश्वज्योतीहल सम्म पुग्थेँ । सानो सानो कुराहरुले पनि धेरै खुशी हुन्थेँ । यस्ता संघर्ष धेरै गरे पनि हात लाग्यो शुन्य नै भयो । घरका मान्छेहरुले पनि अब केही हुदैँन भनेर विदेश जान सुझाए । त्यसैले म सन् २००९ को सुरुवातमा कामको लागि मलेसिया गएँ ।
मलेसियामा म एउटा होटलमा काम गर्न थालेँ । २ महिना जसोतसो काम गरेँ । तर, नसक्ने स्थिति आएपछि फेरि नेपाल फर्किने निर्णय गरेँ । मलाई त्यहाँ लगेको एजेन्सीले फर्किन पाउँदैनस् भन्दा पनि म भने नेपाल फर्किने अडानमै रहेपछि मैले धेरै दुःख पाएँ । अनेक समस्यालाई पार गरेर म स्वदेश फर्कन सफल भएँ । नेपाल फर्किने बित्तिकै सुरज सुब्बा नाल्बो सरले मलाई ‘सायद’ चलचित्रमा चयन गर्नुभयो । ‘सायद’ फिल्म पाउँदा म एकदम खुशी भएँ । यो मेरो जीवनको एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने लागेको थियो । तर, फिल्म रिलिज अलि ढिलो भयो । अरु फिल्ममा कामपाउन मुस्किलै थियो ।त्यसैले झापामा हुने महोत्सवहरु तिर उद्घोषक भएर कामहरु गर्नथालेँ । आखिर जीवन त जसो तसो चलाउनै पर्यो ।
महोत्सवहरुमा कलाकारको जमघट हुन्थ्यो । म कार्यक्रम उद्घोष गर्दा पनि दर्शकहरुलाई हँसाउने गर्थेँ । एकदिन केदार घिमिरे माग्ने बुढा त्यस्तै कार्यक्रममा आउनुभयो । त्यो बेलामा म भेटे जति कलाकारलाई एक मौका दिनुस् भन्ने आग्रह गर्थेँ ।माग्ने बुढालाई पनि त्यहि कुरा भनेँ । उहाँले नम्बर दिनुस् भन्नुभयो, नम्बर दिएँ । के के आउँछ ? भन्नुभएको थियो । मैले त्यो समयमा ४ वटा क्यारेक्टर देखाएको थिएँ । उहाँले त्यसमध्ये तक्मे बुढा क्यारेक्टरलाई छान्नुभयो । पछि उहाँले फोन गरेर तक्मे बुढा गरौँ भन्नुभयो त्यसपछि गरियो पनि ।
तक्मे बुढा पहिला रिलिज भयो अनि मेरो फिल्म सायद रिलिज भयो । सायदमा मैलै तक्मे बुढा भन्दा पहिला काम गरेको थिएँ । एकाएक दुवै तर्फबाट यति धेरै सफलता प्राप्तभयो कि कुरा सम्झिदा खुशीको आँसु आउँछ । त्यसपछि टेलिभिजन र स्टेजमा तक्मे बुढाको भूमिकामा मैले सफलता पाउँदै गएँ भने ठुलो पर्दामा सायदले मलाई माथि लगिदियो । ‘सायद’ चलचित्रबाट मात्र मैले त्यो बर्ष ६ वटा अवार्ड जितेँ । त्यस पछि त मेरो कलाकारिता फस्टाउँदै गयो ।
Prevनर्भिक अस्पतालले देब्रो खुट्टाको अपरेशनमा दाहिने खुट्टाको अपरेशन गरिएपछि…
Nextआङकामी शेर्पाले गरे फेरी अर्की चेलीको उद्दार (भिडियो सहित)
यातायात महासंघ अध्यक्षसँग रविको चर्काचर्की ! अस्पतालको शैयाबाट प्रहरीलाई रोसनाको चुनौती (भिडियो सहित ) सिधाकुरा जनतासंग
श्रीमतीको लागि लैजाँदै गरेको ‘गिफ्ट’ जाँच गर्दा एयरपोर्टमा सुरक्षाकर्मीको भागाभाग,मानिसहरु झोला हेर्नासाथ चकित
आत्म ह’त्या गरेका सुशान्तको अन्तिम फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक (भि’डियो सहित)
काठमाडौंमा पत्रकारले गरे आत्महत्या,बचाउन सकिन्थ्यो तर….सुसाइड नोटमा यस्तो लेखिएको थियो